09 ဇူလိုင်၊ 2021
covid third wave in Myanmar
ဒီတပတ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း စပြင်းထန်လာချိန် ကာကွယ်ကုသရေးအကြောင်း ပြောထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု ကိုဗစ်-19 လှိုင်းစပြင်းထန်လာချိန်မှာ၊ ပိုအဓိကထား ကာကွယ်စရာနဲ့ ကုသရေးပြင်ဆင်စရာတွေကို၊ အားလုံးဝိုင်းပူးပေါင်းလုပ်သင့်ပြီလို့ ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေက အထူးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လို အဓိက ကာကွယ်စရာတွေပါလဲ။ ဘယ်လို ကုသရေး ပြင်ဆင်စရာတွေ အရေးကြီးနေပါလဲ။
ဒီအကြောင်း ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရနဲ့၊ အမေရိကန် CDC ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနမှာ လေ့လာသင်ကြားခဲ့တဲ့၊ ကူးစက်ရောဂါဗေဒကျွမ်းကျင်သူ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဟုတ်ကဲ့ ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းက တရိပ်ရိပ်နဲ့ပေါ့နော် နေ့စဉ် ထောင်ဂဏန်းတွေနဲ့ချီတက်လာနေတာကြောင့် အခုလိုအချိန်မှာ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ ကုသနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမှာမို့ အဓိက ကာကွယ်ရေးကို ဘာစပြောချင်လဲခင်ဗျာ။
ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး ။. ။ ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းထဲမှာ အဓိကအကျဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ ကတော့ မိမိအိမ်နေထိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်မနေ ထွက်ရတဲ့နည်းလမ်းရှိမယ်။ မဖြစ်မနေ အလုပ်လုပ်တဲ့လူတောင် အလည်အပတ်သွားတာမျိုး။ အကြောင်းမရှိထွက်တာမျိုး ဒါမျိုးကိုတော့ ရှောင်ရမယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ် ၆ဝ ထက်ကြီးရင့်တဲ့သူတွေ ။ သွေးတိုး နှစ်လုံး ဆီးချိုပေါ့နော်။ ဒီနာတာရှည် ရောဂါအခံရှိသူတွေက တတ်နိုင်သမျှအိမ်မှာပဲနေရမယ်။ အိမ်ပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း အကာကွယ်ပေါ့ ။ အထူးသဖြင့် Mask ကိုတော့ မဖြစ်မနေတတ်သင့်တယ်။ ပြီးတော့ အများသုံးပစ္စည်းတွေကို မကိုင်တွယ်မီနဲ့ ကိုင်တွယ်ပြီးနောက် လက်ကို စက္ကန့် ၂ဝ ကြာအောင်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ တခြားသူတွေနဲ့ ခတ်ခွာခွာနေဖို့လိုပါတယ်။ အချိန်တန်လို့ အိမ်ပြန်ဝင်ရင် ဒီ Mask ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်။ လက်ကို စနစ်တကျဆေးဖို့လိုတယ်။ Stay at Home လို ရောဂါကူးစက်မှုများတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ အပြင်လာတဲ့ အဝတ်တွေကိုတောင်မှာ မီနစ် ၃ဝ လောက် ဆပ်ပြာနဲ့ ရေနဲ့ စိမ်ပြီးတော့မှ လျှော်ဖွတ်သင့်တယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့ အသက်ရွယ်ကြီးရင့်တဲ့သူတွေနဲ့ အနီးကပ် မျက်နှာခြင်းဆိုင် စားသောက်တာမပြုလုပ်သင့်ဖူးပေါ့။ တတ်နိုင်သမျှ အိမ်ထဲမှာ နေရင် Safe ဖြစ်တယ်။ အပြင်သွားတဲ့လူက ကာကွယ်လာမယ်။ အဓိက က ကိုယ်အိမ်ထဲကို ပိုးပြန်သယ်လာမယ့်သူမဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာရေ။ ဒီနေရာမှာ အခု ဗီဇပြောင်း မျိုးကွဲသစ်ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့အနေအထားကိုရော နောက်ဆုံးဘယ်လိုတွေ့ရှိထားသလဲဆရာ ။
ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး ။. ။ အဓိကကတော့ မျိုးပြောင်းတဲ့ဟာက ပိုပြီးတော့ သတိထားရမယ်ဟာဆိုတော့ တော်တော်ကြီးကို မြန်တယ်ပေါ့။ တချို့စာဆောင်တွေကတောင်ရေးလာပြီ။ ဒီမီနစ်ပိုင်းလေးတင်ပေါ့နော်။ WHO ကတော့ အရင် ၁၅ မီနစ်ထိတွေ့တော့မှ Contact ဖြစ်တယ်လို့ ပထမပိုင်းက ကျေညာခဲ့တဲ့ သဘောရှိတယ်။ အခုဟာက မီးနစ်ပိုင်းတောင်မဟုတ်တော့ဘူး။ ပိုးရှိသူနဲ့ အကာကွယ်မပါပဲနဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းလေးတင် အဲလိုလေးထိတွေ့တာနဲ့တင် ကူးစက်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့လေ။ တော်တော်ကြီးကို မြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်။ ပိုပြီးတော့ ဝင်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ကျနော်တို့က အထူးသဖြင့် လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့အခန်းတွေပေါ့နော်။ Cross Ventilation လေဝင်လေထွက်တော့ ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်။ ပြူတင်းပေါက်တွေကို ဖွင့်တော့ထားတယ်။ တဖက်တည်းဖွင့်ထားတယ်။ တဖက်ကပိတ်ထားတယ်။ အဲလိုမျိုးဆိုရင်လည်း လေက ဒီထဲဖြတ်သွားလို့မရဘူးပေ့ါ့။ အဲလိုဟာက တော့ ၂ဖက်လုံးဖွင့်ထား လေဝင်လေထွက်က ကောင်းသွားမယ်။ မကောင်းတဲ့ အခန်းတွေဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ ကူးစက်နိုင်တယ်။ အဲဒီအခန်းထဲကြာတဲ့အချိန် ရယ် Mask ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ရဲ့လား။ တခြားသူတွေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိလား။ လူစုစုဆိုရင် ပိုကူးနိုင်တာပေါ့။ နောက်တခုက ရောဂါလက္ခဏာမပြသူ။ လူကောင်းအတိုင်း။ ဒါပေမယ့် ပိုသယ်လာသူဖြစ်သွားတယ်။ သူနဲ့ ဆက်စပ်သူတွေကြားထဲမှာ ရောဂါလက္ခဏာပေါလာတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ နောက်တခုက ကုသမှုနဲ့အပိုင်းကရော ဘယ်လိုများ ဆက်ရှိမလဲ။
ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး ။.။ ကုသရေးအပိုင်းကလည်း အစပိုင်းက တော်တော်ကြီးကို သတိထားရတယ်ပေါ့။ ပရော်ဖက်ဆာကြီးတွေကိုယ်တိုင်က ညှိပြီးမှ ကုရတာပေါ့။ အဲဒီတုံးကတော့ ဝေဘာဂီတို့ ၊ ဖောင်ကြီးတို့ တောင်ဥက္ကလာပေါ့နော်။ ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထိပ်တန်းဆိုတဲ့ သမားတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် ကြပ်မတ်ပြီးတော့ ကုခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမယ်လည်း အခုက ဒီသမားတော်ကြီးတွေရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ပဲ Clinical Management Guideline ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က ဆိုရင် Version7ဆိုပြီး Upgrade လုပ်တယ်။ အဲခါကြတော့ သမားတော်ကြီးဖြစ်မှ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ လက်ထောက်ဆရာဝန်တယောက် ဒါမှမဟုတ်ရင် သူရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက် အတိုင်ပင်ခံ ဆရာဝန်တယောက် ဆရာဝန်တဦးအနေနဲ့ ကောင်းကောင်းကုသနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်။ ဒါကတော့ ဒုတိယလှိုင်းရဲ့ အားသာချက်လို့ပြောရမှာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံအတော်များများမှာ အဆင်ပြေနေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဒီနေရာမှာ ကုသမှုအတွက် စိန်ခေါ်ချက်တွေကော ဘယ်လိုဆက်ရှိနေလဲ။
ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး ။. ။ စိန်ခေါ်ချက်ကတော့ HR ပေါ့။ ဒါပေမယ်လဲ တော်တော်များများလေးတော့ ဆရာဝန်တွေပြန်ပြီးတော့ အထူးသဖြင့် ရာနှုန်းပြည့် အပြည့်အဝမရခင်ရင်တောင်မှ ရှိတဲ့ အင်အားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်ခြင်း ညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့လည်း အတူတကွပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ကလည်း တတ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းကို ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ ကုသတဲ့အပိုင်းမှာလည်း ဒါ Referral ပေါ့ ။ အဓိက သယ်ယူပို့ဆောင်တဲ့အပိုင်း ။ ဒီအပိုင်းတွေမှာ ဆေးပညာရှင်မှမဟုတ်ဘူး။ မိမိကစ တဦးတယောက်ချင်းလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်။ အဲလိုပဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်။ နောက်တခုက ပုဂ္ဂိုလိကဆေးရုံ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးအသင်း ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်း ပါနိုင်သမျှကနေ ကိုယ်တတ်ရာ တတ်ရာပေါ့နော်။ လုပ်ငန်းပြီးမြောက်အောင် ကိုဗစ်ကို အတူပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရမယ် ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ကုသမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆေးပစ္စည်းအပိုင်းတွေကရော။
ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး ။.။ အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ အောက်စီဂျင်ပေါ့နော်။ အဓိက PPE ပေါ့။ ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက် ကာကွယ်ရေးပေါ့။ နောက်တခုက ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ဆေးဝါးတွေပေါ့။ Clinical Mangement Guide Line ထဲကဆေးဝါးတွေပေါ့။ ကျနော်တို့လက်ထဲမှာ အလုံအလောက်ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ်လည်း တဖက်က လူနာအရမ်းများလာရင် လိုအပ်ချက်ပြောလို့မရဘူး။ လက်ရှိအနေအထားက ရန်ကုန်မှာ စုစုပေါင်း ကိုဗစ်လူနာ
စင်တာတွေ တခုပြီးတခု တိုးချဲ့ပြီးဖွင်လာနေပါတယ်။ တဖက်က လူနာများတဲ့အနေအထားမှာ တဖက်က တိုးချဲ့ဖွင့်လာပါတယ်။ အကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီပေါ့နော်။ တနေရာနဲ့ တနေရာမတူဘူပေါ့နော်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလို ကိုဗစ်လှိုင်း တရိပ်ရိပ်တက်လာပြီဆိုတာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ကုသရေး အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်မမေးမိတဲ့ တခြားအရေးကြီးအချက်ကော
ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုး ။. ။ အဓီက ကတော့ တိကျတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကိုသေစေတဲ့ဆေး ကတော့ အခုထိမပေါသေးဘူးပေါ့။ ခုနက အောက်စီဂျင်ကျရင် အောက်စီဂျင်ပေးပြီးတော့ ဒီခန္ဒာကိုယ် ကနေ တုံပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားအထိ ရောင်ရမ်းမှုတွေ လျော့ကျသွားပြီးတော့ ဒီကိုဗစ်ရဲ့ဟာကို ခန္ဒာကိုယ်က ပြန်နိုင်သွားတဲ့အနေအထားထိ ဘေးကနေ ပန့်ပိုးကူညီပြီးတော့ ဒီခန္ဒာကိုယ်ကြီကို ထောက်ပန့် ကူညီပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဒီဗိုင်းရပ်စ် က မဝင်နိုင်တာ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ ကုသရတဲ့အဆင့်မရောက်အောင် ကာကွယ်တဲ့အဆင့်မှာ ကောင်းကောင်းလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ လူတွေက ကာကွယ်ကြမယ်ဆိုရင် ဆေးရုံဝင်တဲ့ ပမာဏကလည်း နည်းသွားမယ်။ ကုသတဲ့အပိုင်းမှာလည်း အားလုံး ကောင်းပါမယ်လို့ အာမခံလို့မရဘူး။ ကာကွယ်တဲ့အပိုင်း အလေးထားရင် ကုသတဲ့အပိုင်းလျော့ကျသွားမယ်။ တဖက်က ဆေးရုံတွေအပေါ်၊ ကျန်းမာရေးစနစ်အပေါ်၊ ကျန်းမားရေးဝန်ထမ်းအပေါ် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတဲ့အပေါ် ဝန်လည်းလျော့သွားမယ်။ ကာကွယ်တဲ့အပိုင်းဦးစားပေးပါ။
ဒီတပတျကနျြးမာရေးကဏ်ဍမှာ ကိုဗဈတတိယလှိုငျး စပွငျးထနျလာခြိနျ ကာကှယျကုသရေးအကွောငျး ပွောထားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အခု ကိုဗဈ-19 လှိုငျးစပွငျးထနျလာခြိနျမှာ၊ ပိုအဓိကထား ကာကှယျစရာနဲ့ ကုသရေးပွငျဆငျစရာတှကေို၊ အားလုံးဝိုငျးပူးပေါငျးလုပျသငျ့ပွီလို့ ကနျြးမာရေးတာဝနျရှိသူတှကေ အထူးတိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
ဘယျလို အဓိက ကာကှယျစရာတှပေါလဲ။ ဘယျလို ကုသရေး ပွငျဆငျစရာတှေ အရေးကွီးနပေါလဲ။
ဒီအကွောငျး ကနျြးမာရေးနဲ့အားကစားဝနျကွီးဌာန ပွောခှငျ့ရနဲ့၊ အမရေိကနျ CDC ကူးစကျရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဌာနမှာ လလေ့ာသငျကွားခဲ့တဲ့၊ ကူးစကျရောဂါဗဒေကြှမျးကငျြသူ ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုးကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့ ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုး ခငျဗြာ။ ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈ တတိယလှိုငျးက တရိပျရိပျနဲ့ပေါ့နျော နစေ့ဉျ ထောငျဂဏနျးတှနေဲ့ခြီတကျလာနတောကွောငျ့ အခုလိုအခြိနျမှာ အကောငျးဆုံး ကာကှယျနိုငျဖို့နဲ့ ကုသနိုငျဖို့ဆှေးနှေးမှာမို့ အဓိက ကာကှယျရေးကို ဘာစပွောခငျြလဲခငျဗြာ။
ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုး ။. ။ ကာကှယျရေးနညျးလမျးထဲမှာ အဓိကအကဆြုံးနညျးလမျးနဲ့ ကတော့ မိမိအိမျနထေိုငျတဲ့ နညျးလမျးကတော့ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မဖွဈမနေ ထှကျရတဲ့နညျးလမျးရှိမယျ။ မဖွဈမနေ အလုပျလုပျတဲ့လူတောငျ အလညျအပတျသှားတာမြိုး။ အကွောငျးမရှိထှကျတာမြိုး ဒါမြိုးကိုတော့ ရှောငျရမယျ။ အထူးသဖွငျ့ အသကျအရှယျ ၆ဝ ထကျကွီးရငျ့တဲ့သူတှေ ။ သှေးတိုး နှဈလုံး ဆီးခြိုပေါ့နျော။ ဒီနာတာရှညျ ရောဂါအခံရှိသူတှကေ တတျနိုငျသမြှအိမျမှာပဲနရေမယျ။ အိမျပွငျထှကျမယျဆိုရငျလညျး အကာကှယျပေါ့ ။ အထူးသဖွငျ့ Mask ကိုတော့ မဖွဈမနတေတျသငျ့တယျ။ ပွီးတော့ အမြားသုံးပစ်စညျးတှကေို မကိုငျတှယျမီနဲ့ ကိုငျတှယျပွီးနောကျ လကျကို စက်ကနျ့ ၂ဝ ကွာအောငျဆေးဖို့လိုပါတယျ။ တခွားသူတှနေဲ့ ခတျခှာခှာနဖေို့လိုပါတယျ။ အခြိနျတနျလို့ အိမျပွနျဝငျရငျ ဒီ Mask ကို စနဈတကြ စှနျ့ပဈဖို့လိုတယျ။ လကျကို စနဈတကဆြေးဖို့လိုတယျ။ Stay at Home လို ရောဂါကူးစကျမှုမြားတဲ့မွို့နယျတှမှော အပွငျလာတဲ့ အဝတျတှကေိုတောငျမှာ မီနဈ ၃ဝ လောကျ ဆပျပွာနဲ့ ရနေဲ့ စိမျပွီးတော့မှ လြှျောဖှတျသငျ့တယျ။ အိမျမှာရှိတဲ့ အသကျရှယျကွီးရငျ့တဲ့သူတှနေဲ့ အနီးကပျ မကျြနှာခွငျးဆိုငျ စားသောကျတာမပွုလုပျသငျ့ဖူးပေါ့။ တတျနိုငျသမြှ အိမျထဲမှာ နရေငျ Safe ဖွဈတယျ။ အပွငျသှားတဲ့လူက ကာကှယျလာမယျ။ အဓိက က ကိုယျအိမျထဲကို ပိုးပွနျသယျလာမယျ့သူမဖွဈဖို့လိုတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့ ဆရာရေ။ ဒီနရောမှာ အခု ဗီဇပွောငျး မြိုးကှဲသဈရဲ့ ပွငျးထနျတဲ့အနအေထားကိုရော နောကျဆုံးဘယျလိုတှရှေိ့ထားသလဲဆရာ ။
ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုး ။. ။ အဓိကကတော့ မြိုးပွောငျးတဲ့ဟာက ပိုပွီးတော့ သတိထားရမယျဟာဆိုတော့ တျောတျောကွီးကို မွနျတယျပေါ့။ တခြို့စာဆောငျတှကေတောငျရေးလာပွီ။ ဒီမီနဈပိုငျးလေးတငျပေါ့နျော။ WHO ကတော့ အရငျ ၁၅ မီနဈထိတှတေ့ော့မှ Contact ဖွဈတယျလို့ ပထမပိုငျးက ကညြောခဲ့တဲ့ သဘောရှိတယျ။ အခုဟာက မီးနဈပိုငျးတောငျမဟုတျတော့ဘူး။ ပိုးရှိသူနဲ့ အကာကှယျမပါပဲနဲ့ စက်ကနျ့ပိုငျးလေးတငျ အဲလိုလေးထိတှတေ့ာနဲ့တငျ ကူးစကျနိုငျတဲ့အနအေထားပေါ့လေ။ တျောတျောကွီးကို မွနျဆနျတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နျော။ ပိုပွီးတော့ ဝငျနိုငျတဲ့သဘောရှိတယျ။ ဒါကွောငျ့မိုလို့ ကနြျောတို့က အထူးသဖွငျ့ လဝေငျလထှေကျမကောငျးတဲ့အခနျးတှပေေါ့နျော။ Cross Ventilation လဝေငျလထှေကျတော့ ကောငျးတယျလို့ထငျရတယျ။ ပွူတငျးပေါကျတှကေို ဖှငျ့တော့ထားတယျ။ တဖကျတညျးဖှငျ့ထားတယျ။ တဖကျကပိတျထားတယျ။ အဲလိုမြိုးဆိုရငျလညျး လကေ ဒီထဲဖွတျသှားလို့မရဘူးပေ့ါ့။ အဲလိုဟာက တော့ ၂ဖကျလုံးဖှငျ့ထား လဝေငျလထှေကျက ကောငျးသှားမယျ။ မကောငျးတဲ့ အခနျးတှဆေိုရငျတော့ ပိုပွီးတော့ ကူးစကျနိုငျတယျ။ အဲဒီအခနျးထဲကွာတဲ့အခြိနျ ရယျ Mask ကို စနဈတကတြပျဆငျရဲ့လား။ တခွားသူတှနေဲ့ နီးနီးကပျကပျရှိလား။ လူစုစုဆိုရငျ ပိုကူးနိုငျတာပေါ့။ နောကျတခုက ရောဂါလက်ခဏာမပွသူ။ လူကောငျးအတိုငျး။ ဒါပမေယျ့ ပိုသယျလာသူဖွဈသှားတယျ။ သူနဲ့ ဆကျစပျသူတှကွေားထဲမှာ ရောဂါလက်ခဏာပေါလာတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ နောကျတခုက ကုသမှုနဲ့အပိုငျးကရော ဘယျလိုမြား ဆကျရှိမလဲ။
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး ။. ။ ကုသရေးအပိုငျးကလညျး အစပိုငျးက တျောတျောကွီးကို သတိထားရတယျပေါ့။ ပရျောဖကျဆာကွီးတှကေိုယျတိုငျက ညှိပွီးမှ ကုရတာပေါ့။ အဲဒီတုံးကတော့ ဝဘောဂီတို့ ၊ ဖောငျကွီးတို့ တောငျဥက်ကလာပေါ့နျော။ ဒီလိုနရောမြိုးတှမှော မွနျမာနိုငျငံမှာ ထိပျတနျးဆိုတဲ့ သမားတျောကွီးတှကေိုယျတိုငျ ကွပျမတျပွီးတော့ ကုခဲ့တာပေါ့။ ဒါပမေယျလညျး အခုက ဒီသမားတျောကွီးတှရေဲ့ ကောငျးမှုနဲ့ပဲ Clinical Management Guideline ဆိုပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ရကျက ဆိုရငျ Version7ဆိုပွီး Upgrade လုပျတယျ။ အဲခါကွတော့ သမားတျောကွီးဖွဈမှ မဟုတျတော့ဘူးပေါ့နျော။ လကျထောကျဆရာဝနျတယောကျ ဒါမှမဟုတျရငျ သူရဲ့ကွီးကွပျမှုအောကျ အတိုငျပငျခံ ဆရာဝနျတယောကျ ဆရာဝနျတဦးအနနေဲ့ ကောငျးကောငျးကုသနိုငျတဲ့အနအေထားပေါ့နျော။ ဒါကတော့ ဒုတိယလှိုငျးရဲ့ အားသာခကျြလို့ပွောရမှာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံအတျောမြားမြားမှာ အဆငျပွနေတေဲ့သဘောရှိတာပေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ ကုသမှုအတှကျ စိနျချေါခကျြတှကေော ဘယျလိုဆကျရှိနလေဲ။
ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုး ။. ။ စိနျချေါခကျြကတော့ HR ပေါ့။ ဒါပမေယျလဲ တျောတျောမြားမြားလေးတော့ ဆရာဝနျတှပွေနျပွီးတော့ အထူးသဖွငျ့ ရာနှုနျးပွညျ့ အပွညျ့အဝမရခငျရငျတောငျမှ ရှိတဲ့ အငျအားနဲ့ရငျဆိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ သဘောထားခွငျးမတိုကျဆိုငျခွငျး ညီအကိုမောငျနှမတှအေနနေဲ့လညျး အတူတကှပါဝငျမယျဆိုတဲ့ ဝနျကွီးဌာနတှအေနနေဲ့ကလညျး တတျနိုငျသမြှဆောငျရှကျပေးနတေဲ့အကွောငျးကို ကနြျောတို့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးနဲ့ ကုသတဲ့အပိုငျးမှာလညျး ဒါ Referral ပေါ့ ။ အဓိက သယျယူပို့ဆောငျတဲ့အပိုငျး ။ ဒီအပိုငျးတှမှော ဆေးပညာရှငျမှမဟုတျဘူး။ မိမိကစ တဦးတယောကျခငျြးလုပျနိုငျတဲ့အပိုငျးလညျးရှိတယျ။ အဲလိုပဲ စတေနာ့ဝနျထမျးလုပျပေးနိုငျတဲ့အပိုငျးလညျးရှိတယျ။ နောကျတခုက ပုဂ်ဂိုလိကဆေးရုံ မွနျမာနိုငျငံကနျြးမာရေးအသငျး ဒီလိုမြိုးအဖှဲ့တှအေနနေဲ့လညျး ပါနိုငျသမြှကနေ ကိုယျတတျရာ တတျရာပေါ့နျော။ လုပျငနျးပွီးမွောကျအောငျ ကိုဗဈကို အတူပူးပေါငျးတိုကျဖကျြရမယျ ကာလဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ကုသမှုအတှကျ လိုအပျတဲ့ ဆေးပစ်စညျးအပိုငျးတှကေရော။
ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုး ။. ။ အဓိကအရေးကွီးတာကတော့ အောကျစီဂငျြပေါ့နျော။ အဓိက PPE ပေါ့။ ဒီဝနျထမျးတှအေတှကျ ကာကှယျရေးပေါ့။ နောကျတခုက ဝနျထမျးတှအေတှကျ ဆေးဝါးတှပေေါ့။ Clinical Mangement Guide Line ထဲကဆေးဝါးတှပေေါ့။ ကနြျောတို့လကျထဲမှာ အလုံအလောကျရှိသေးတယျ။ ဒါပမေယျလညျး တဖကျက လူနာအရမျးမြားလာရငျ လိုအပျခကျြပွောလို့မရဘူး။ လကျရှိအနအေထားက ရနျကုနျမှာ စုစုပေါငျး ကိုဗဈလူနာ
စငျတာတှေ တခုပွီးတခု တိုးခြဲ့ပွီးဖှငျလာနပေါတယျ။ တဖကျက လူနာမြားတဲ့အနအေထားမှာ တဖကျက တိုးခြဲ့ဖှငျ့လာပါတယျ။ အကောငျးဆုံးတော့ပွငျဆငျထားပွီပေါ့နျော။ တနရောနဲ့ တနရောမတူဘူပေါ့နျော။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလို ကိုဗဈလှိုငျး တရိပျရိပျတကျလာပွီဆိုတာ ကာကှယျရေးနဲ့ ကုသရေး အပိုငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ကနြျောမမေးမိတဲ့ တခွားအရေးကွီးအခကျြကော
ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုး ။. ။ အဓီက ကတော့ တိကတြဲ့ ဗိုငျးရပျဈ ကိုသစေတေဲ့ဆေး ကတော့ အခုထိမပေါသေးဘူးပေါ့။ ခုနက အောကျစီဂငျြကရြငျ အောကျစီဂငျြပေးပွီးတော့ ဒီခန်ဒာကိုယျ ကနေ တုံပွနျနိုငျတဲ့အနအေထားအထိ ရောငျရမျးမှုတှေ လြော့ကသြှားပွီးတော့ ဒီကိုဗဈရဲ့ဟာကို ခန်ဒာကိုယျက ပွနျနိုငျသှားတဲ့အနအေထားထိ ဘေးကနေ ပနျ့ပိုးကူညီပွီးတော့ ဒီခန်ဒာကိုယျကွီကို ထောကျပနျ့ ကူညီပွီးတော့ ဆောငျရှကျပေးရတဲ့အပိုငျးပေါ့နျော။ အကောငျးဆုံးကတော့ ဒီဗိုငျးရပျဈ က မဝငျနိုငျတာ အကောငျးဆုံးပဲပေါ့နျော။ ကုသရတဲ့အဆငျ့မရောကျအောငျ ကာကှယျတဲ့အဆငျ့မှာ ကောငျးကောငျးလုပျထားဖို့လိုပါတယျ။ လူတှကေ ကာကှယျကွမယျဆိုရငျ ဆေးရုံဝငျတဲ့ ပမာဏကလညျး နညျးသှားမယျ။ ကုသတဲ့အပိုငျးမှာလညျး အားလုံး ကောငျးပါမယျလို့ အာမခံလို့မရဘူး။ ကာကှယျတဲ့အပိုငျး အလေးထားရငျ ကုသတဲ့အပိုငျးလြော့ကသြှားမယျ။ တဖကျက ဆေးရုံတှအေပျေါ၊ ကနျြးမာရေးစနဈအပျေါ၊ ကနျြးမားရေးဝနျထမျးအပျေါ ဆကျစပျပတျသကျနတေဲ့အပျေါ ဝနျလညျးလြော့သှားမယျ။ ကာကှယျတဲ့အပိုငျးဦးစားပေးပါ။
မဲဆောက်မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်
ကူးစက်မြန် ကိုဗစ်ကြောင့် တနိုင်ငံလုံး စာသင်ကျောင်းတွေ ၂ ပတ်ပိတ်
KIO ဌာနချုပ်နှင့် ထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့ ကိုဗစ် တတိယလှိုင်း စတင်ရိုက်ခတ်
ဂျပန်အိုလံပစ် ပရိသတ်တွေ တက်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့် ပြုမည်မဟုတ်